Fitaovana fanatsarana ny fivarotana App 10 ambony hanatsarana ny filahanao amin'ny laharana fampiharana malaza | Martech Zone
Miaraka amin'ny Fampiharana 2.87 tapitrisa azo jerena ao amin'ny Android Play Store ary misy fampiharana 1.96 tapitrisa mahery hita ao amin'ny iOS App Store, tsy hanitatra izahay raha nilaza fa mihombo hatrany ny tsenan'ny fampiharana. Raha ny lojika, ny fampiharana anao dia tsy mifaninana amin'ny fampiharana hafa avy amin'ny mpifaninana aminao ao amin'ny akany iray ihany fa amin'ny fampiharana avy amin'ny faritra sy tsenan'ny tsena.
Raha mieritreritra ianao dia mila singa roa handraisan'ny mpampiasa anao hitazona ny fampiharana anao - ny sain'izy ireo sy ny toerana fitahirizany. Noho ny tsena lasa feno fampiharana amin'ny karazany isan-karazany dia mila zavatra mihoatra ny fampiharana finesse fampiharana sy ny teknika fampivoarana fampiharana izahay hahazoana antoka fa ekena, alaina ary ampiasain'ny mpihaino kendrena kendrena.
Izany indrindra no mahatonga ny fanatsarana ny fampiharana tsy azo ihodivirana. Mitovy amin'ny fanatsarana ny motera fikarohana, izay misy tetika, fitaovana, fombafomba ary teknika aparitaka mba hisehoan'ny tranonkala na pejy web eo amin'ny pejy voalohany amin'ny valin'ny karoka, Optimization App Store (Aso) manao fampiharana miseho eo an-tampon'ny valin'ny fikarohana ao amin'ny fivarotana app.
Inona no atao hoe Optimization amin'ny App Store? (ASO)
ASO dia fitambaran'ny paikady, fitaovana, fombafomba ary teknika naparitaka mba hanampiana ny laharan-tariby findainao hijoro tsara kokoa sy hanara-maso ny laharam-pahamehany ao anatin'ny valin'ny fikarohana App Store.
Ny iray amin'ireo antony lehibe tsy azo ihodivirana ny fanatsarana ny fivarotana app dia satria manakaiky 70% ny mpampiasa amin'ny fivarotana fampiharana dia ampiasao ny safidim-pikarohana hitadiavana ireo fampiharana tiany na vahaolana mifototra amin'ny fampiharana. Miaraka amin'ny 65% ​​ny valin'ny karoka niova fo, tena mila eo an-tampon'ny fampiharana ianao raha mitady hahazo mpampiasa bebe kokoa, mahazo famatsiam-bola, mivoatra toy ny marika ary maro hafa.
Mba hanampiana anao hahatratra ireo, eto izahay miaraka amin'ny fanatsarana ny fivarotana app izay manokana, ny tombony ary ny fitaovana 10 tsy maintsy ananana. Noho izany, raha mpamorona rindrambaiko ianao, orinasam-pampandrosoana fampiharana na orinasa ASO, ity fanoratana ity dia hanome fanazavana ny sasany amin'ireo fitaovana fanatsarana ny fivarotana app.
Andao hanomboka, fa alohan'izay, ireto misy tombony hafa haingana amin'ny fanatsarana app store.
Soa azo avy amin'ny fanatsarana App Store
Iray amin'ireo tombony voalohany amin'ny fampiasana fitaovana sy teknika ASO ny fanatsaranao ny fahitana ny fampiharana anao ao amin'ny magazay fampiharana azy tsirairay avy. Izay zava-dehibe indrindra amin'ny valin'ny fikarohana dia heverina ho mahatoky avokoa. Ankoatr'izany dia manolotra anao ireto tombony manaraka ireto ny fanatsarana ny fivarotana app:
Amin'ny alàlan'ny fanatsarana ny fisian'ny App Store anao sy fanatsarana ny laharanao, ASO:
Mahatonga fametrahana fanampiny ho an'ny fampiharana findainao.
Ahafahanao mitondra fidiram-bola ao anaty fampiharana bebe kokoa.
Manhena ny vidinao amin'ny fahazoana mpampiasa fampiharana vaovao.
Manatsara ny fahatsiarovan-tena amin'ny marika, na dia tsy apetrany amin'ny voalohany aza izany.
Manosika fiara miaraka amin'ireo mpampiasa manana kalitao ambony sy avo lenta izay hampiasa ny fampiharana azonao atao mahomby. Ireo mpampiasa toy izany dia mety hampiasa ny endri-javatra premium anao, maodelin'ny famandrihana ary maro hafa.
Fitaovana ASO malaza indrindra hanatsarana ny laharan'ny app
Ny fomba fijerin'ny tsena feno no ilainao mba hahatonga ny fampiharana ho eo an-tampon'ny valin'ny fikarohana ary App Annie manao an'izany fotsiny. Miaraka amin'ny angon-drakitra lehibe indrindra, App Annie dia manome anao fahitana betsaka momba ny tsena tianao, ny mpifaninana aminao, ny fampiharana mitovy aminy sy ny maro hafa.
Filaharana teny lakile
Antontan'isa sy tatitra momba ny fampiasana app
Tombana amin'ny vola miditra
Fanaraha-maso fivarotana fampiharana amin'ny fotoana tena izy miaraka amin'ny fomba fijery amin'ny tabilao ambony, antsipirian'ny fampiharana, tantaran'ny laharana ary maro hafa
Ny ampahany tsara indrindra amin'ny App Annie dia ny tsy fanomezana maodely famandrihana na modely momba ny vidiny. Ireo mpampiasa dia mahazo teny namboarina namboarina mifototra amin'ny zavatra ilain'izy ireo.
Tower of Sensor
Iray amin'ireo fitaovana fikarohana teny fanalahidy tsara indrindra, Tower of Sensor manolotra anao fahitana amin'ny teny fanalahidy sasany ampiasain'ny mpifaninana aminao fa diso anjara ianao. Manampy anao hanova ny fandrahonana ho tonga fotoana mety izany ary hoso-doko amin'ireo fivarotana ny fisian'ny fampiharana anao.
Keyword planner, mpikaroka ary fitaovana fanatsarana
Fanaraha-maso ny fampiasana app
Fandikana teny lakile sy ny maro hafa
Sensor Tower dia manolotra fahasamihafana amin'ny vidiny miaraka amin'ny vidin'ny orinasa 3 sy fonosana orinasa kely 2. Miaraka amin'ny vidiny manomboka eo amin'ny $ 79 isam-bolana ka hatrany amin'ny fitanisana namboarina, ny mpampiasa dia afaka manamboatra ny endrik'izy ireo ary mandoa mifanaraka amin'izany.
Natao ho an'ny traikefa nahafinaritra, ny App tweak manolotra tatitra be dia be sy fiasa momba ny toerana. Miaraka amin'ny tatitra namboarina avy any amin'ny firenena 60 manerana ny mariky ny fikajiana isan-karazany dia fitaovana nofinofin'ny mpivarotra fampiharana izany. Na izany aza, ny mpampiasa dia tsy misy afa-tsy ho an'ny mpampiasa iOS.
Fanaraha-maso ny teny fanalahidy
Tombana amin'ny karama sy ny maro hafa
Fitsapana maimaimpoana 7 andro atolotry ny App Tweak ho an'ireo mpampiasa vaovao zatra ny fampiharana sy hijery ny fahaizany. Raha vantany vao vita io dia afaka misafidy drafitra fanombohana ($ 69 isam-bolana) izy ireo na misafidy ny drafitra Guru na Power amin'ny $ 299 sy $ 599 isam-bolana.
Mobile intelligence no USP an'ny Apptopia, izay ahafahan'ny mpamorona fampiharana sy ny tompona orinasa mahazo fomba fijery miasa sy miasa lehibe amin'ny metrika finday momba ny vokatra, ny varotra, ny paikadim-bola, ny fampiasana ary bebe kokoa handraisana fanapahan-kevitra arahin'andraikitra.
Toro-marika fampisehoana lehibe
Fitaovana fikarohana eny an-tsena
Maminany na manombatombana ny fironan'ny mpanjifa
Fampiasana app an'ny orinasam-panjakana sy maro hafa
Ny vidin'ny fampiharana dia manomboka amin'ny $ 50 isam-bolana, izay ahafahan'ny orinasa mampiasa hatramin'ny 5 ny fampiharana.
Ankafizin'ny vahoaka, ny hetsika finday Ny app dia manolotra karazana endri-javatra tsy manam-paharoa aseho amin'ny UI tena tsara. Ny mampiavaka ny fampiharana dia ny fahafahany manombatombana ny fahombiazan'ny fampiharana amin'ny teny lakile manokana.
Soso-kevitra amin'ny teny lakile
Fanamarinana ny teny fanalahidy
Soso-kevitra momba ny teny lakile mpifaninana
Tatitra mandroso sy maro hafa
Mitovy amin'ny App Tweak, ny mpampiasa dia mahazo andrana maimaimpoana 7 andro aorian'ny fisoratana anarana. Alefaso ity, afaka mandoa $ 69, $ 599 na $ 499 isam-bolana ho an'ny drafitra Starter, Winner ary Premium izy ireo.
Ho anao izay mitady hampiroborobo ara-organika ny laharan'ny fampiharana sy fahitana anao, Splitmetrics no fitaovana tsara indrindra ASO anao. Manolotra hevi-baovao amin'ny antsipirihany momba ny fampiasana ny app anao, ao anatin'izany ny faharetan'ny fahitan'ny mpampiasa anao horonan-tsary anaty fampiharana sy doka fampiroboroboana hanampiana anao hahatakatra bebe kokoa ny mpanjifanao.
Toeram-pikarohana mahatratra 30 isan-karazany hijerena sy ahazoana hevi-baovao avy amin'izany
Torohevitra avy amin'ireo veterana ao an-trano Splitmetrics
Fitsapana mialoha ny fandefasana app
Fanandramana fampisehoana amin'ny mpifaninana aminao sy ny maro hafa
Ny fitaovana dia mitaky anao haka demo ary avy eo mahazo teny nalaina manokana miankina amin'ny zavatra ilainao.
Raha mifantoka amin'ny fahazoana mpampiasa ho an'ny fampiharana anao ny laharam-pahamehanao. Appfollow no fitaovana fanatsarana fampiharana faran'izay tsara indrindra mety ho azonao. Nilaza ireo mpamorona ny fitaovana fa afaka mahazo fisondrotana 490% amin'ny fametrahana fampiharana biolojika sy fampitomboana 5X ny fiheverana isan-kerinandro amin'ny fivarotana app ny fampiharana anao.
Miaraka amin'ny fampiharana dia azonao atao ny manara-maso ny sasany amin'ireo metrika fampisehoana ilaina indrindra toy ny fanovana ny toeran'ny teny fanalahidy, ny taham-panovana, ny fisintomana ary jereo ny paikadin'ny fanatsarana ny fampiharana ny mpifaninana aminao hanovana ny anao koa. Azonao atao ihany koa ny mametraka ny fampiharana anao miaraka amin'ireo endri-pitenenana fandikan-teny natolotry ny fitaovana.
Performance Index amin'ny fivarotana
Automation ny fikarohana teny lakile
Fanadihadiana sy topy maso ny mpifaninana
Fanairana ASO nalefa tany amin'ny mailaka sy Slack
Benchmarks ho an'ny tahan'ny fiovam-po sy maro hafa
Ho an'ny orinasa, ny vidiny dia manomboka amin'ny $ 55 isam-bolana amin'ny alàlan'ny $ 111 isam-bolana sy ny drafitra vidin'ny namboarina ho an'ny fanontana orinasa.
Raha ny Splitmetrics dia momba ny fampiroboroboana ny fahitana ara-organika, StoreMaven dia momba ny fanatsarana ny tahan'ny fiovam-po. Amin'ny alàlan'ny fanatontosana fomba siantifika sy antonta-data amin'ny fanombanana ny fihetsiky ny mpanjifa, dia manome anao fanandramana, fitaovana fitsapana ary fanombanana an-taonina maro izy mba hiantohana ireo mpitsidika anao hiova ho mpampiasa.
StoreMaven aza mizara antontan'isa izay ny fampiharana azy dia nahatonga fiakarana 24% amin'ny taham-panovana, 57% ny fihenan'ny fahazoan'ny mpampiasa ary 34% ny fidirana an-tsehatra.
Paikady sy drafitra fanatsarana manokana
Fitsapana ivelany sy fitsapana ny valiny
Fikarohana fifaninanana sy maro hafa
StoreMaven dia mitaky anao haka demo ary avy eo mahazo teny nalaina manokana miankina amin'ny ilainao.
Apptitive dia natao hamakivakiana ny elanelana misy eo amin'ny fandraisana andraikitra sy ny fahatakarana ny fihetsiky ny mpampiasa. Izy io dia miorina amin'ny hevitra fototra fa ny mpamorona fampiharana sy ny orinasa dia tsy mahazo fidirana mety amin'ny mason-tserin'ny mpampiasa sy ny metimika firotsahana hanatsarana ny fampiharana azy ireo amin'ny fahombiazana sy fahitana. Apptitive dia eto mba hampifanaraka ny zava-drehetra.
Fandraisana fidirana amin'ny fotoana tena izy
Fakafakao ny fahasalamana amin'ny app, ny fomba fijerin'ny mpanjifa ary maro hafa
Fikarohana manokana sy fandrefesana ny fampisehoana ary maro hafa
ASOdesk manome anao fahitana feno momba ny fangatahana ampiasain'ny mpampiasa anao sy ny mpihaino kendrenao hahatratra ny fampiharana mitovy amin'ny anao eny an-tsena. Ankoatr'izay, milaza aminao ihany koa ireo teny lakile izay ampiasain'ny mpifaninana aminao sy ny fampahalalana fanampiny momba ny teny lakilen'ny fifaninanana ambany. Farany, ny fampiharana dia manome anao koa fampahalalana mitsikera momba ny fahombiazan'ny tetikady ASO.
Keyword analytics, mpikaroka ary mpikaroka
Tatitra sy antontan'isa biolojika
Fanaraha-maso ny valiny sy fanamarihana
Fanadihadiana momba ny teny lakile mpifaninana ary maro hafa
Misy drafitra roa momba ny vidiny misy - ny iray ho an'ny fanombohana sy ny orinasa kely ary ny iray ho an'ny orinasa sy orinasa. Ny vidin'ny fanombohana dia manomboka amin'ny $ 24 isam-bolana ary hatramin'ny $ 118 hatrany. Ho an'ny orinasa, etsy ankilany, ny vidiny dia manomboka amin'ny $ 126 isam-bolana ka hatramin'ny $ 416 isam-bolana.
Ka izany no fitaovana malaza sy mahomby indrindra hanatsarana ny fahitana ny fampiharana anao any amin'ny fivarotana app. Miaraka amin'ireo fitaovana eny an-tànana dia afaka manamboatra làlana ho an'ny fahitana ara-organika ianao, fampitomboana ny fahazoana mpampiasa, ahena ny vidin'ny per-lead, sy maro hafa. Ankehitriny, azonao atao ny mampiasa ireo fitaovana ary miasa miaraka amin'ny fanatsarana ny fahombiazan'ny rindranasao ho an'ny fampiasa azy koa. Raha mikaroka torohevitra hafa hamidy ny fampiharana findainao ianao dia ity ny torolàlana feno:
Torohevitra hividianana ny fampiharana findainao
Tags: app androidfampiharana appieapp storeapp optimization optimizationlaharana fivarotana appfampiharana tweakappfollowpaoma fampiharanaapple storemanintonaapptopiaasoasodeskGooglegoogle play storeny fomba fivarotana ny fampiharana findainaoiOSfampiharana ioshetsika findaymarketing amin'ny findaymagazay fampiharana findaylaharana App Store findaytilikambo sensorsplitmetricsstoremaven